China Modern rechargeable clitoris stimulator ZK003C orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | ANDREFANA
Model No.: ZK003C
Size: 12.3 * 3.8 * 3.7cm
Function: minono 10-mode
• Ilay mandrisika mitsentsitra nono tanana amin'ny endriny tsotra sy kanto, dia tian'ny vehivavy indrindra.
• Ny silikaly amin'ny ambaratonga ara-tsakafo dia mitondra fahatsapana malefaka faran'izay malefaka ary fiasan'ny mode 10 no tena mandrisika sy mahatonga ny vehivavy hiala sasatra aorian'ny asa mafy iray andro.
• Ny famolavolana bokotra bokotra iray dia afaka mifamadika mora foana eo amin'ny matetika mba hahitana ny maody tianao. Mandritra izany fotoana izany, ny LED maizina sy ny tabataba ambany dia miaro ny tsiambaratelo. Ny endrika tsotra sy mora ampiasaina dia mahatonga azy io ho tian'ny olona sy tiany.
Teo aloha: Vibrator miaraka amina silipo malemilemy ary lohan'ny filahiana toy ny tena fiainana VV455
Manaraka: Famporisihana klitoris miolakolaka tsy miova miaraka amin'ny ZK005 mitsentsitra sy mangovitra
Mpanentana clitoris miolakolaka mihintsy miaraka amin'ny ...
Vibrator miaraka amin'ny VV170A mitsentsitra sy vibrator